मलाई थाहा छैन कहिले प्रकोप हुन्छ! जापानमा भूकम्प वा आँधी आयो भने मैले के गर्नुपर्छ? जीवन | जापान गाइड र सूचना |アクセス日本留学
मलाई थाहा छैन कहिले प्रकोप हुन्छ! जापानमा भूकम्प वा आँधी आयो भने मैले के गर्नुपर्छ?
अद्यावधिक | अगस्त ०,, २०२०
भूकम्प, आँधीबेहरी, भारी वर्षा ... विभिन्न विपत्तिहरू हालसालै भएको छ। जापान धेरै भूकम्प भएको देश हो। हामीले "प्रकोप भन्दा अघि" के गर्नुपर्छ, "प्रकोप पछि"? यस लेखमा, म तपाइँलाई तयार गर्नु पर्छ के जापानी परिचय छ र जापानी कि तपाइँ एक विपत्ती को मामला मा सम्झना गर्नुपर्छ।
प्रकोप आउनु अघि म चीजहरू किन्न चाहन्छु
जापानीज प्रकोप को मामला मा सम्झन
"-Tete" प्राय: आवाश्यक हुन्छ
अनिवार्य फारमहरूको साथ निषेध फारमहरू जाँच गर्नुहोस्
आपतकालिनका लागि जापानीलाई आवश्यक रहेको वर्णन गर्ने एक वेबसाइट
यो एक प्रकोप पछि धेरै ढिलो भयो! अब तयार हुनुहोस्
A प्रकोप आउनु अघि तपाईले के किन्न चाहानुहुन्छ
प्रकोपको स्थितिमा, बिजुली काटिन सक्छ र तपाईं बाहिर जान सक्षम हुनुहुन्न। यस्तो अवस्थामा, फ्ल्यासलाइट (तपाईंसँग विद्युतीय उपकरण) वा पानी लिन सुरक्षित हुन्छ। साथै, तपाईं दिन बाहिर बाहिर जान सक्षम नहुन सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाईं केही खाना पर्छ। क्यान्ड खाद्य पदार्थहरू, कप रमेन र सुपरमार्केटहरू र सुविधा स्टोरहरूमा बिक्री गरिएको स्नैक्सहरू किन्नुभए पछि उनीहरूलाई लामो समयको लागि छोड्न सकिन्छ। यस्तो आपतकालमा सुविधाजनक खानालाई "आपतकालीन खाना" भनिन्छ।
यदि तपाइँलाई दीर्घकालीन रोग छ भने, सुतिरहेको बेलामा औषधी नजीक राख्नुहोस्, ताकि तपाइँ कुनै पनि समयमा लिन सक्नुहुन्छ। भूकम्पको कारणले चीजहरू घट्न सक्छन् र अन्य चोटपटक लाग्न सक्छ, त्यसैले एक बन्सो स्मारिका पक्का गर्नुहोस्।
अब म आपतकालिन झोलाहरू पनि बेच्छु जुन तपाईं आफैं सँगसँगै विपत्तिको स्थितिमा लैजान सक्नुहुनेछ वा आफैंलाई नजिक राख्नुहोस्। यदि तपाईंले एक किन्नुभयो भने, यो सिफारिस गरियो किनकि यसमा सबै आवश्यक वस्तुहरू छन्। गुगल वा याहू जापान जस्ता खोजी ईन्जिनको प्रयोग गरी, "आपतकालिन" र "बोसाई सामानहरू" भन्ने शब्दहरूको साथ खोजी गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। तपाईं यसलाई अनलाइन पनि किन्न सक्नुहुन्छ।
● जापानीज प्रकोप को मामला मा सम्झन
मार्च २०११ मा, पूर्वी जापानमा ठूलो भूकम्प भयो, जसले सुनामी ल्यायो र ठूलो क्षति पुर्‍यायो। भाग्नको लागि सोधिएको अवस्थामा पनि केही विदेशीहरूले जापानीज बुझ्न समस्या भइरहेको थियो।
यदि तपाईं एक शुरुआती हुनुहुन्छ भने, त्यहाँ केहि जापानीहरू छन् जुन तपाईंले एक आपतकाल आउँनु अघि सम्झनु पर्छ। सबैभन्दा पहिले, जापानी भाषा प्रवीणता टेस्ट N4 स्तरमा देखा पर्ने अपरिहार्य र निषेध रूपहरू व्याकरणहरू हुन् जुन प्राय आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गरिन्छ।
-"-Tete" प्राय: आवश्यक हुन्छ
उदाहरणको लागि, "भाग्नुहोस्" र "भाग्नु" आवश्यक छ, र केही व्यक्तिहरूले जापानीलाई अत्यावश्यक रूपमा बोलेको कहिल्यै सुनेका थिएनन्। प्रकोपको घटनामा, तपाइँले भाग्न हतार गर्नु पर्ने हुन सक्छ। नम्र जापानी लामो छ, त्यसैले हामी कहिलेकाँही छोटो अभिव्यक्ति र आवश्यकको लागि सोध्छौं।
● आउनुहोस् निषेधित फारमहरूको साथ साथै आवश्यक फारामहरू जाँचौं
यदि तपाईं विपत्तीमा अभ्यस्त हुनुहुन्न भने, तपाईं तुरुन्तै भाग्न सक्नुहुनेछ, तर जब तपाईं बाहिर जानुहुन्छ, भवनको झ्यालको शीशा भाँचिन सक्छ र तपाईं घाइते हुन सक्नुहुन्छ, वा भवन ढल्छ। "नजानुहोस्" र "नजानुहोस्" को अर्थ "बाहिर नजाऊ" र "जानुहुन्न" भन्ने प्रयोग गरीन्छ, तर अत्यावश्यक जस्तो निषेध प्राय जसो प्रकोप देखा पर्दछ।
● आपतकालिनहरूको लागि जापानीलाई बुझाउने एउटा वेबसाइट
हालसालै, कुमामोटो प्रान्तमा एक विपत्ति आयो। त्यसकारण, कुमामोटो प्रान्त वेबसाइटमा विदेशीहरूका लागि जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली र भियतनामी भाषामा लेखिएका प्याम्प्लेटहरू छन्।
कुमामोटो प्रान्तमा बसोबास गर्ने मानिसहरू मात्र होइन, जापानी पनि जुन आपतकालिन र के गर्न जापान भर प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर परिचय गराइन्छ। कृपया यसलाई पढ्नुहोस्
सन्दर्भ:विदेशी बासिन्दाहरूको लागि प्रकोप रोकथाम पर्चा (सजिलो जापानी, अंग्रेजी, चिनियाँ, कोरियाली, भियतनामी)
A यो एक प्रकोप पछि धेरै ढिलो भयो! अब तयार हुनुहोस्
उचित तयारीको साथ, तपाईं भूकम्प वा आँधीको घटनामा शान्तपूर्वक कार्य गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। एउटा ठूलो आपतकालमा, तपाईं आफ्नो स्मार्टफोनमा कसैलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ वा तपाईंको इन्टरनेट जडान हराउनुहुनेछ। तपाइँले जान्नुपर्दछ कि तपाइँको जीवनलाई बचाउनको लागि कुनै प्रकोप आउनु भन्दा पहिले।